Banijya News | » अवैध धन्दा गर्ने चीनियाँको भेटियो चार करोडको कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनीः नेपालले ७२ कामदार राख्ने अनुमति दिएको खुलासा अवैध धन्दा गर्ने चीनियाँको भेटियो चार करोडको कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनीः नेपालले ७२ कामदार राख्ने अनुमति दिएको खुलासा – Banijya News
अवैध धन्दा गर्ने चीनियाँको भेटियो चार करोडको कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनीः नेपालले ७२ कामदार राख्ने अनुमति दिएको खुलासा
पुस १४ काठमाडौं ।
विदेशीले नेपालमा कम्पनी खोलेर काम गर्ने भन्ने वित्तिकै नेपाल सरकराले आँखाचिम्लेर स्विकृती दिने गरेको छ । विदेशीले के मा लगानी गर्देछन् ? त्यसबाट राज्यलाई के फाइदा पुग्छ ? त्यस्को कुनै लेखाजोखा हुने गरेको छैन् । परिणम विदेशीले नेपालमा कम्पनी खोलेको नाममा अवैध धन्दा संचालन गर्ने गरेका छन् ।
अधिल्लो हप्ता मात्र अवैध धन्दा संचालन गरेको गरेको आरोपमा पक्राउ परेका १ सय २२ जना चिनियाँ नागरिकको नेपाल कनेक्सन खोजी गर्दे गर्दा नेपालमा बैंद्य तरिकाले कम्पनी खोलेर अबैद्य कारोवार गरेको पाइएको हो ।
पक्राउ परेकाको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले मनमैजुबाट ७२ जना पक्राउ गरेकामा त्यही स्थानमा यिदा नेपाल नामको कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनी चलाउन उद्योग विभागबाट अनुमति लिएको भेटिएको छ । चार करोड रुपैयाँ लगानीमा ७२ जना कामदार रहने गरी दर्ता गराइएको कम्पनीले सफ्टवेयर सम्बन्धि के काम गर्यो ? अनुसन्धान जटिल देखिएको छ ।
चिनियाँ पक्राउ पछि सरकारले विदेशी लगानीका नाममा सजिलै उद्योग दर्ता गर्ने गरेको फाइदा अपराधमा संलग्न चिनियाँ नागरिकले उठाएको देखिन्छ । नेपालमा चिनियाँ नागरिक अपराधमा मुछिएको नौ महिना भइसकेपनि ती उद्योग कात्तिक महिनामा दर्ता गराइएको खुलेको छ । पक्राउ परेका चिनियाँलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरुमाथि अहिले दोभाषेको सहयोगमा सोधपुछ गर्नेदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा अनलाइन ठगीदेखि जुवा खेलाउनेसम्मको संगठित आर्थिक अपराधमा संलग्न चिनियाँ नागरिकले आफ्नो कर्तुत ढाकछोपका लागि नेपालमा उद्योग नै दर्ता गराएको खुलेको छ । उनीहरुले एक हजारभन्दा बढी चिनियाँलाई कामदारका रुपमा भित्र्याएर फरक फरक नाममा एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग दर्ता गराएको भेटिएको हो ।
पक्राउ परेका चिनियाँलाई थप ७ दिन थुनामा राख्न प्रहरीले आइतबार अनुमति पाएको छ । दर्ता गराइएका उद्योग कुन अवस्थामा छन् भन्ने निगरानी सरकारी निकायबाट हुने नगरेको असर अहिले पक्राउ परेका चिनियाँमाथि के कार्वाही गर्ने भन्ने दुविधा प्रहरीलाई परेको छ । त्यसमा पक्राउ परेका मध्य नेपालमा अपराध नदेखिनु अनी करोडौंको लगानी देखिनुले अनुसन्धानलाई थप जटिलता पैंदा गरेको हो ।